मजदुरले अब आन्दोलन नै गर्न नपाउने ! – Everest Dainik – News from Nepal
मजदुरले अब आन्दोलन नै गर्न नपाउने !
काठमाडौं, साउन ८ । नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर होटल तथा क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरहरुले आगामी दिनमा आफ्नो अधिकार माग गरेर आवाजसमेत उठाउन नपाउने भएका छन् ।
नेपाल होटल संघ हान, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट युनियन, नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघबीच मजदुरले आगामी दिनमा आन्दोलन गर्न र कुनै पनि माग राख्न नपाउने सम्झौता भएको हो । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
ट्याग्स: आन्दोलन नै गर्न नपाउने, मजदुर आन्दोलन